WordPress Plugin: Vhura Vhidhiyo Mune A Lightbox ine Elementor | Martech Zone
WordPress Plugin: Vhura Vhidhiyo Mune A Lightbox ine Elementor
Svondo, October 18, 2020 Svondo, October 18, 2020 Douglas Karr
Isu takagamuchira webhusaiti ine mutengi iyo yakavakwa nayo Elementor, inoshamisa dhonza uye inodonha yekugadzirisa plugin yeWordPress iyo inoshandura kuti zviri nyore sei kuvaka yakaoma, marongero akanaka anoteerera… pasina programming kana kudiwa kwekunzwisisa mapfupi makodhi.
Elementor ine zvimwe zvaisingakwanise, imwe yacho yandakamhanyira kunoshanda pane yevatengi saiti. Ivo vaingoda bhatani rakavhura vhidhiyo muLightbox ... chimwe chinhu icho Elementor hachipe. Unogona kushanda uchitenderedza nyaya uchishandisa mufananidzo uine kana usina bhatani rekutamba ... asi Elementor ane rakakura bhatani chinhu. Ndiri kushamisika kuti havana kupa izvi kunze kwebhokisi.
Nekutenda, pane plugin yeizvozvo!
Zvakakosha Wedzera-Ons eElementor
Nekutenda, kune akati wandei makuru mawedzero-eElementor kunze pamusika. Iwe unofanirwa kuve wakanyatso chenjera kana uchisarudza anogadzira plugin, zvakadaro. Kuve neWordPress saiti yakavakirwa paElementor inogadzira kutsamira paElementor. Zvino, kuva ne-add-on yakavakwa nemumwe mutengesi kunogadzira kumwe kutsamira. Zvakakosha mukubudirira kweWebhusaiti yako saiti kuti uve nechokwadi chekuti mugadziri wepulagiji ane zvakawanda zvekuisa uye mari inosanganiswa yekuchengetedza nekuvandudza mapulagi sezvo shanduro dzeWordPress neElementor dzichigadziriswa.
Imwe inonakidza plugin ndeye Zvakakosha Wedzera-Ons eElementor. Iine anodarika mazana masere ematanho, iyo plugin inogona kunge iri inonyanya kufarirwa element yekuwedzera-pane plugin yeElementor pamusika. Chinhu chakakosha mune ino plugin kugona kuwedzera uye kugadzirisa lightbox kune yako WordPress webhusaiti yakavakwa neElementor.
Elementor Lightbox Bhatani
Paunenge iwe waisa iyo yakabhadharwa vhezheni yeiyo Inokosha Wedzera-Ons kune Elementor plugin, gonesa iyo Lighbox & Modal chimiro chekutarisa chinhu icho mune chako Elementor zvinhu. Ipapo iwe unogona kutsvaga nekuzvvuzvurudza mune rako peji nyore.
Ipapo iwe unozoda kugadzirisa maviri marongero echinhu:
Seta iyo Zvirongwa> Trigger ku Bhatani Dzvanya
Seta iyo Zvirongwa> Type ku bhatani
Gadza Zvirongwa> Bhatani Rugwaro
Gadza Zvemukati> Type ku Batanidza kune Peji / Vhidhiyo / Mepu
Gadza Zvemukati> Ipa Peji / Vhidhiyo / Mepu URL kune yako Vhidhiyo URL
Iwe unogona ipapo kugadzirisa iyo lightbox uye bhatani dhizaini sezviri kudikanwa. Icho chiitiko chisina musono pakati peiyi yekuwedzera-uye Elementor.
Nepo icho chikamu pamwe chingangodaro chakange chakakodzera kubhadhara, iyo Inokosha Wedzera-Ons yeElementor plugin ine toni yezvimwe zvinhu zvinosanganisirwa zvese zviri zviviri mune yemahara uye yakabhadharwa vhezheni. Ongorora: Iyo Lightbox mashandiro ari mune yakabhadharwa vhezheni.
Zvakakosha Wedzera-Ons eElementor: Mahara Ezvinhu
Iyo yemahara vhezheni ine zvimwe zvakakosha zvinhu izvo zvinogona kuwedzerwa:
Info Bhokisi - Ratidza kiyi ruzivo ne Info Bhokisi mhando nekuwedzera Icon Pamusoro uye wedzera mhedzisiro mhedzisiro.
Yepamberi Accordion - ratidza zvirimo, gonesa iyo yekuchinja icon, zadza iyo kodhi yekodoni pamwe neyaunoda mameseji & ita kuti itaridzike inopindirana kune vateereri.
Woo Chigadzirwa Grid - Showcase WooCommerce zvigadzirwa kwese kupi uye kuratidza zvigadzirwa nechikamu, ma tag, kana hunhu. Nyore wedzera hover mhedzisiro pane dhizaini kuti iite inoshamisa.
Flip Bhokisi - Ratidza zvirimo zvakaomarara neflip kuruboshwe / kurudyi kwemifananidzo pane mbeva hover.
Yepamberi Tabs - ratidza kiyi ruzivo mune inofambidzana nenzira inotsigira tsika yakagadzirwa nested tabo dhizaini kukwezva vateereri mune imwe muenzaniso.
Mutengo weTeri - gadzira inoshanda tafura yemitengo tafura ine yakanakira dhizaini kuti uwane zvimwe kutengesa kubva kune vako vanotarisira vatengi.
Mufananidzo Accordion - Simbisa mifananidzo yako nekushamisa hover uye tinya mhedzisiro uchishandisa EA Image Accordion.
Post Grid - ratidza akawanda mablog mablog mune dhizaini dhizaini. Iwe unogona kusarudza yako yakasarudzika marongero kubva pakurongwa marongero, wedzera kuchangamuka kwairi, uye woita kuti itaridzike inopindirana nevashanyi.
Call to Action - Nyora yako yekufona Kuti Uitwe zvemukati, ruvara, uye ubatanidze iyo kunongedza vashanyi kune chaunoda chiito.
Countdown - Vaka uye gadzira iyo timer kubva kusarudzo yemhando dzakasiyana.
Tumira Nguva - ratidza mablog mablog, mapeji, kana echinyakare zvinyowani mune anoshamisa akamisikidzwa dhizaini. Iwe unogona kuseta yako yaunofarira nhamba yezvinyorwa, wedzera zvinoshamisa mhedzisiro, chifukidzo chemufananidzo, bhatani, uye zvimwe kudhonza vateereri kufarira.
Filterable Garari - Ratidza mifananidzo ine akasiyana zvikamu, grid Styles, uye gadzirisa iyo yakazara dhizaini kuve nechokwadi chinoshamisa kutarisa.
Dhawunirodha Zvakakosha Wedzera-Ons eElementor
Zvakakosha Wedzera-Ons kune Elementor: Kubhadharwa Zvinhu
Neshanduro yakabhadharwa, iwe unowana imwe tononi yezvimwe zvinhu zvinonyatsopa kugona kwakanyanya mune yako Elementor-based theme.
Lightbox & Modal - kuratidza mavhidhiyo ako, mifananidzo, kana zvimwe zvirimo zvine popup. Iwe unogona kuseta zvaunoda zvekutanga zviito, wedzera iyo animation, uye woisa dhizaini yekuwedzera kubatanidzwa.
Mufananidzo Kuenzanisa - ipa simba vatengi vako kuti vaenzanise pakati pemifananidzo yako miviri yechigadzirwa (Zvekare maringe Nyowani) nenzira inoshamisa.
Logo Carousel - sarudza chako chishuwo carousel mhedzisiro, wedzera logo uye dhizaini izvo zvinoburitsa kuratidza vese vako vatengi kana vadyidzani zvakanaka.
Parallax Mhedzisiro - bvumira vashanyi vako kuti vaone yako saiti ine yakawanda-yakatetepa parallax mhedzisiro iyo inosanganisira iyo mbeva hover kudyidzana.
Promo - Wedzera musoro unokwezva, zvemukati zvemukati, zvemukati zve mouseover, uye mifananidzo yakanaka kutora meso emuenzi wako.
Zvemukati Toggle - Wedzera hover mhedzisiro kune yako zvemukati iyo inoratidza musiyano waunoshuvira kuti vashanyi vako vatarise pairi.
Google Maps - Gadzira chinhu chemepu, wedzera mamaki emaki, uye uite kuti iwirirane nevashanyi.
Particle Mhedzisiro - wedzera zvigadzirwa zvekugadzira pawebhusaiti yako kuti zvionekwe.
Inopindirana Makadhi - unza hunyanzvi hwepamberi senge yemukati kupuruzira uye hover mhedzisiro kune ako emukati mabhuroko.
Zvakachengetedzwa - chengetedza zvirimo ne password kana nebasa revashandisi.
Tumira Chivharo - ratidza ako blog mablog nemhando dzakasiyana dzeakasiyana masitayera uchishandisa simba reazvino CSS Flex. Unogona kusarudza marongero, wedzera mifananidzo, wedzera chiratidzo, uye dhizaini zvese - kusanganisira hover mhedzisiro.
Yepamberi Tooltip - wedzera maturu ekushandisa kumusoro uye pazasi zvemukati.
Imwe Peji Navigation - gadzira peji rimwe chete webhusaiti ine mashoma mashoma ekushandisa Elementor.
Chipupuriro Slider - gadzira inowirirana hupupuriro bhodhi iyo inoratidza akawandisa akati wandei zvakanaka mune imwe yemukati nzvimbo.
Instagram - bata wevashanyi vesaiti yako uye tyaira vamwe vateveri ve Instagram nekuratidzira iyo Instagram feed pane yako saiti.
Mufananidzo Hotspot - wedzera hotspots yenzvimbo yemufananidzo neyakajairwa maturu ekushandisa, kuitira kuti mushandisi akwanise kubaya pane hotspots kuti aburitse chinyorwa chakabatana.
Sarudzo ine plugin iyo yandinonyatsokoshesa kugona kugonesa kana kudzima yega yega yezvinhu zviri mukati mewebsite. Izvi zvinogumira pamusoro pechinyorwa chega chega chinyorwa kuwedzerwa kune yako saiti.
Tags: bhatanielementorelementor yekuwedzera-onselementor bhatanivhidhiyo lightboxWordPressWordpress mupepetiWordpress plugin
Elementor: A Anoshamisa Edhita Ekugadzira Akanaka WordPress Mapeji uye Zvinyorwa
Maitiro Ekumisikidza 3-Pfungwa Mwenje yeYako Mhenyu Mavhidhiyo